IPhilips yenza amalambu ayo amaHue adansele umsindo weSpotify | Izindaba zegajethi
UMiguel Hernandez | 01/09/2021 17:37 | General, Izaziso
Muva nje Philips wenze umcimbi obukeka uthakazelisa kakhulu esikwazile ukuwuthamela nalapho sibambe khona ukuthi yiziphi izindaba ezilandelayo ezingeni lehadiwe nele-software esigabeni seHue esikhathini esisele sonyaka ka-2021.
Lesi sikhathi sima ekubambisaneni okuthakazelisa kakhulu ukuthi, ngokuthembeka, asazi ukuthi umuntu ubengacabangi ngani ngaphambili. I-Spotify ne-Philips bayasebenzisana ukuvumelanisa umculo wakho nama-light light akho nokwenza izindawo ezinamandla. Vele, abafana baseSpotify abayeki ukusimangaza ngezicelo ezahlukahlukene zensizakalo yabo yokusakaza umculo.
Akukona konke esikubonile okuye kwaba yi-software, futhi ukuthi uphiko lweHue lumemezele ibha entsha yokukhanya yethelevishini, kanye nokwenza ngcono okuncane kwamanye ama-bulbs ayo asebenza kahle kakhulu futhi aqhakazile. Noma ngubani onekhaya eliphelele noPhilips Hue njengoba kuyicala lami, uzokwazi ukuthi lawa ma-bulb awabonakaliswa ngokunembile ngamandla abo okukhanyisa.
Manje sinezindaba zomculo zalabo basebenzisi bePhilips Hue abajabulela ama-light bulbs anemibala ehlukahlukene noma amadivayisi ahlukile we-RGB. Uma uya esigabeni sokuzijabulisa sohlelo lwe-Hue kumadivayisi eselula, uzokwazi ukuvumelanisa uhlelo lwakho neSpotify futhi izokunikeza ithuba lokufanisa umculo wakho nokukhanyisa kwakho, uzokwenza izibani zidanse ngokoqobo.
Lesi sici sesivele sikhishiwe, udinga ukubuyekeza uhlelo lwakho lokusebenza lwePhilips Hue bese ulandela izinyathelo ezibalulwe ngenhla. Thatha leli thuba ukukhumbula ukuthi uPhilips Hue unemethadatha yezingoma, ngakho-ke ukubona ngeso lengqondo umbono ngeke kuthathe ukubambezeleka ngomculo. Okwamanje, ungaqhubeka nokubheja ekukhanyeni okudala. Khumbula lokho ku-Actualidad Gadget Sinezifundo eziningi ku-YouTube zokuthi ungayihlanganisa kanjani imishini yakho yokukhanyisa yasekhaya ehlakaniphile.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » IPhilips yenza izibani zayo zeHue zidansele umsindo weSpotify